Cabashadii Shacabka ee Sompower: Ma Farxadda Ciidda ayaa lagu illaaway!. Siciid Maxamuud Gahayr
Saturday August 01, 2020 - 14:11:30 in Wararka by Super Admin
Sompower X Kaah iyada oo dhaqaale adeegsanaysa waxay hilfaha u soo laabeen bahdii korontada Hargeysa sida mishiinnadii Xaaji Fuyuus ee New Hargeysa, Axmed-Dheere Jameecada, Alhuda Axmed-dhagax, Jees suuqa dhexe, Sheekh Aadan suuqa dhexe, kuwii xero-jaadda, Almis, xus qaar kale?
Nin baa yidhi "Cismaan Kaahinow intaan magaca aabbahay ka guuro, ka waalidkaa Kaahin ee aad Kaah u soo qaadatay kula qaadan maayo, ee mid dhexe inoo rar". Markii hore General Energy iyo wax bay la baxeen, aakhirkiina Sompower.
Natiijadi waxa ay noqotay cuna-qabad, kooto, dhiig-miirad, xitaa ganacsatadii marka hore ay saamiga ku qasbeen ayaaa macaash la'aan ka cabanaya. Anigu waxan joogaa guri uu illaa 2000 u baxo nal 24 saac ahi, ka qiime jaban kan Sompower, horteed ahaa 24 saac,buquujinta maatida ayaan diiddanahay